समाचार – Page 387 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०२:२५ English
माओवादी लडाकुको बिदाई प्रक्रिया आज पनि जारी २ बैशाख २०६९, शनिबार ०८:५४
आज विशेष समितिको बैठक बस्ने, कार्यदलले जुटाएको सहमतिबारे छलफल हुने
काठमाडौ, २ बैशाख । माओवादी लडाकु रेखदेख, पुनस्र्थापना तथा समायोजन विशेष समितिको बैठक आज बस्दै छ । नयाँ बानेश्वरमा रहेको सचिवालयमा बस्ने बैठकमा समायोजनका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन गठन गरिएको कार्यदलले जुटाएको सहमति अनुमोदन गर्नेबारे छलफल हुने भएको छ । कार्यदलको हिजो र अस्ति..
शान्ति प्रक्रिया उल्टिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो अब संविधान निर्माणमा जुट्नु पर्छ: खनाल
काठमाडौ, २ बैशाख । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको हुदाँ अब दलहरु संविधान निर्माणमा जुट्नु पर्ने बताएका छन्। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा पार्टी कार्यालय वल्खुमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष खनालले..
शिविरमा सेना परिचालन गर्नु असंवैधानिक कदम: वैद्य पक्ष
काठमाडौ, २ बैशाख । जारी शान्ति प्रक्रियासंग असहमत माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरहरुले लडाकु शिविरमा सेना परिचालन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको जिकिर गरेका छन् । वैद्य र उनको बिद्रोहलाई साथ दिने पक्षको शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले..
पूर्वराजाको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेना फिर्ता १ बैशाख २०६९, शुक्रबार २१:२४
काठमाडौ, १ बैशाख (रासस)। सरकारले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिइँदै आएको नेपाली सेनाको सुरक्षालाई हटाएको छ। पूर्व राजा र उनका परिवारको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले सेनानीको नेतृत्वमा २५ जना सैनिक खटाएको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाले पूर्व राजाको सुरक्षाका लागि..
बाँकी समयमै संविधान निर्माण हुने राष्ट्रपतिको विश्वास
काठमाडौ, १ बैशाख । नयाँवर्ष २०६९ को अवसरमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरूमा शान्ति, सुख र समृद्धिको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति डा यादवद्वारा नव वर्ष २०६९ को अवसरमा दिनुभएको सन्देशमा वि.स. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमार्फत प्राप्त..
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न नयाँ वर्षले नयाँ उर्जा दिने प्रधानमन्त्रीको भनाई
काठमाडौ, १ बैशाख । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पश्चात मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न र नयाँ संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभयिानको क्रममा मनाउन थालिएको नयाँवर्षले थप ऊर्जा प्रदान गर्नेमा विश्वास ब्यक्त..
गणतान्त्रिक नेपाल हिंसाबाट शान्तिको बाटो तर्फ: प्रधानमन्त्री भट्टराई ३० चैत्र २०६८, बिहीबार २०:३१
काठमाडौ, ३० चैत । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गणतान्त्रिक नेपाल हिंसाबाट शान्तिको बाटो तर्फ अग्रसर भएको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा यस्तो कार्यको सुरुवात भएकोमा खुशी ब्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकार शान्ति र संविधान निर्माणका क्रममा निरन्तर लागेकै परिणाम..
शान्ति र संविधानको पक्षमा आउन बाध्य भए प्रचण्ड-बाबुराम; नयाँ सरकार सुशीलको नेतृत्वमा
देवप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौ, ३० चैत । । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तत्काल लडाकु समायोजन गरी शिविर खाली गरेर शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन बाध्य भएका छन्। उनीहरूको यही बाध्यताले लडाकु तथा हतियार सेनाको जिम्मामा..
कार्यदलले लडाकु समयोजनसम्बन्धी सबै विवादमा सहमति जुटायो
काठमाडौ, ३० चैत । समायोजन रोजेका माओवादी लडाकुहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नेबारेमा उत्पन्न विवाद मिलाउन गृहकार्यको जिम्मा पाएको कार्यदलको बैठकले विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ । विशेष समितिको सचिवालयमा बसेको बैठकले मिल्न बाँकी रहेको विषयहरूमा सहमति जुटाएको हो । कार्य दलले..
सेना समायोजनको निर्णयपछि राष्ट्रिय सहमतीको बाताबरण बन्योः खनाल
काठमाडौ, ३० चैत । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओबादीका लडाकु र हतियार राज्यको माताहत ल्याउने बिषेश समितीको पछिल्लो निर्णयले राष्ट्रिय सहमतीको बाताबरण तयार भएको बताउनुभएको छ । शान्ति र संबिधान निर्माणमा सिराहबासिसँग सुझाब लिन गर्नुभएको बिशेष टेलिफोन सम्बादमा आज ..
राजतन्त्र नफर्कने राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापाको दावी
महोत्तरी, ३० चैत । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब आफूहरुले चाहेर पनि मुलुकमा राजतन्त्र फर्कने संभावना नरहेको बताउनु भएको छ । नयाँ बन्ने संविधानले सबैलाई समेट्नु पर्ने भन्दै उहाँले संविधानले कसैलाई निषेध भने गर्नु नहुने बताउनुभयो । महोत्तरीको बर्दिवासमा आज..
समायोजनमा रहेको विवाद मिलाउन कार्यदलको छलफल सुरु
काठमाडौ, ३० चैत । समायोजन रोजेका माओवादी लडाकुहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नेबारेमा उत्पन्न विवाद मिलाउनेगरी खाका बनाउने जिम्मा पाएको कार्यदलले छलफल थालेको छ । माओवादी लडाकु रेखदेख समायोजन तथा पुनस्थापना विशेष समितिको सचिवालयको कार्यालय नयाँवानेश्वरमा जारी बैठकमा नेपाली..
काठमाडौ, ३० चैत । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । देशको शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन र आर्थिक समृद्धि लगायतका विषय समेटेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार..
प्रहरीले बैद्य पक्षको जुलुसमा हस्तक्षेप गर्दा एक दर्जन घाईते, एक दर्जन पक्राउ २९ चैत्र २०६८, बुधबार २१:१३
काठमाडौ, २९ चैत । लडाकु र हतियार नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउने सेना समायोजन विशेष समितिको निर्णय विरुद्ध बुधवार साँझ माओवादीको बैद्यपक्षधरले निकालेको मसाल जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी एक सभासद सहित करिब १ दर्जन कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बुधबार बिहान चक्काजाम..
सेना समायोजन भाड्न षडयन्त्र देखेर हतारमा लडाकु सेनाको जिम्मा लगाएको प्रचण्डको भनाई
काठमाडौ, २९ चैत । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सेना समायोजनलाई विथोल्न विभिन्न तत्व लागेको र त्यसले प्रक्रिया विथोलिने देखेपछि लडाकुलाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाईएको बताएका छन् । आज आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरुसँगको कुराकानीमा..